Others Archives - Page3of 201 - Yangon Media Group
နိုင်ငံတကာ သမိုင်းသုတေသနဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ပွဲ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပမည်
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၂ - နိုင်ငံ တကာနှင့် မြန်မာစာတမ်းရှင် ၂၁ ဦးပါဝင်မည့် Old View and New Version နိုင်ငံတကာသမိုင်း သုတေသန ဆိုင်ရာစာတမ်းဖတ်ပွဲ}} ကို စက်တင်ဘာ ၁၆...
ဖုန်းဆိုင်များ၌ အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းမကပ်ဘဲ ရောင်းချပါက ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ တိုင်းကြားနိုင်
မကွေး၊ ဩဂုတ် ၂၁ - မကွေး တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဖုန်းဆိုင် များ၌ အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းမကပ်ဘဲ ရောင်းချပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့ နယ်များရှိ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနသို့ တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ဩဂုတ် ၂၀ ရက် ညနေ...
ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သော ရေးမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများ၌ ရေတွင်းရေကန်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဆေးဖျန်းခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးနေ
ရေး၊ ဩဂုတ် ၂၁ - မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီး မြစ်ရေကြီးမြင့် ကာ ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သော မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများ၌ သောက်သုံးရေများ အခက်အခဲမရှိစေရန် မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကျန်းမာရေးဦးစီး ဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ ရေတွင်းရေကန်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ဆေးဖျန်းခြင်း လုပ်ငန်းများကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း...
မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် မွန်ပြည်နယ်၌ ဆားပိဿာ ၄၇ သိန်းကျော်ပျက်စီးပြီး ငွေကျပ်သိန်း ၇၀ဝ၀ ကျော်ဖိုး ဆုံးရှုံးခဲ့
မော်လမြိုင်၊ ဩဂုတ် ၂၁ - မွန် ပြည်နယ်အတွင်း ဩဂုတ် ၉ ရက် မှစတင်၍ မိုးသည်းထန်စွာ အဆက် မပြတ်ရွာသွန်းမှုကြောင့် ဆားပိ ဿာချိန် ၄၇၇၉၀ဝ၀ ပျက်စီးပြီး ငွေကျပ် ၇၁၆၈သိန်းကျော်ဖိုးဆုံး ရှုံးခဲ့ကြောင့်...
ရန်ကုန်-မန္တလေး ကားလမ်းဟောင်းရှိ စက်သုံးဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်၌ ဆီကဲ့စဉ် မီးလောင်
ပဲခူး၊ ဩဂုတ် ၂၀- ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး ပဲခူးမြို့နယ် ဘုရားကြီး မြို့ (၂)ရပ်ကွက် ပဒေသာရပ် ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းဟောင်း ရှိ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်တစ် ဆိုင်၌ ဆီကဲ့စဉ် မီးလောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ယာဉ်မောင်း...
သူနာပြုအကူ ကိုးလသင်တန်း မကြာမီဖွင့်မည်
နေပြည်တော်၊ ဩဂုတ် ၂၀-သူနာ ပြုအကူ ကိုးလသင်တန်းကို နေ ပြည်တော်၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး ဆေးရုံကြီးတို့တွင် မကြာမီဖွင့် လှစ် သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။ ဩဂုတ် ၂၀ ရက် အမျိုးသား လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင်...
ညောင်တုန်းတွင် ဖွဲနုတင် ဒိုင်နာယာဉ် အရှိန်လွန်ဝင်တိုက်မှုကြောင့် ကန်တာယာဉ်တိမ်းမှောက် နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၂၀ - ညောင် တုန်းမြို့နယ်အတွင်း ဖွဲနုတင် ဒိုင်နာယာဉ်က အရှိန်လွန်ပြီး ကန်တာအား ဝင်တိုက်မှုကြောင့် ကန်တာတိမ်းမှောက်ခဲ့ရာ နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ ကညင်း ကောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊...
မုံရွာပညာရေးကောလိပ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်၍ ဖဲကြိုးစိမ်းလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်
မုံရွာ၊ ဩဂုတ် ၁၉- မုံရွာပညာရေးကောလိပ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့မှဦးဆောင်၍ စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး မုံရွာပညာရေးကောလိပ်၌ ပညာ ရေးကောလိပ်မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ များ ဆက်လက်ပညာသင်ကြားခွင့်အတွက် တောင်းဆို လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သော ဖဲကြိုးစိမ်းလှုပ်ရှားမှုကို ဩဂုတ် ၁၉ ရက်...
နိုင် ငံတကာ လူငယ်များနေ့အခမ်းအနား မုံရွာတက္ကသိုလ်တွင် ကျင်းပ
မုံရွာ၊ ဩဂုတ် ၁၉ - စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး လူငယ်ရေးရာကော်မတီ က ကြီးမှူး၍ နိုင်ငံတကာ လူငယ် များနေ့ အခမ်အနားကို ၂၀၁၉ ခု နှစ် ဩဂုတ် ၁၉ ရက်က မုံရွာ...
မသန်စွမ်းသူ ၁၀ဝ၀ ကျော်ရှိသော အောင်လံမြို့၌ မသန်စွမ်းသူများအသင်း ဖွဲ့စည်းမည်
မကွေး၊ ဩဂုတ် ၁၉ -မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး အောင်လံမြို့နယ်အ တွင်း မသန်စွမ်းသူလူဦးရေ ၁၀ဝ၀ ကျော်ရှိပြီး မသန်စွမ်းသူများ အတွက် ရသင့်ရထိုက်သော အခွင့်အရေး များရရှိအောင် မြို့နယ်မသန်စွမ်း သူများအသင်းကို ဖွဲ့စည်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ "ကျွန်တော်တို့မြို့မှာ...
Page3of 201 Prev 1234… 201 Next
ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီ၏ နှစ်ပါတီပူးပေါင်းရေး ကမ်းလှမ်းထားမှု ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း အကြောင်းပြန??
စု တု သူခိုး မရှိရိုး
မဲဆောက် ကားမီးလောင်မှု သေဆုံး မြန်မာများအတွက် တစ်ဦးလျှင် ဘတ်လေးသိန်းစီ ထိုင်းက နစ်နာကြေးေ??
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ငှက်များ ကျက်စားမှုပြမြေပုံ ရေးဆွဲနေ ဟုဆို
ယူကရိန်းနိုင်ငံ၏ လက်နက်ခဲယမ်း သိုလှောင်ရုံ မီးလောင်ပေါက်ကွဲ၊ လူပေါင်း ၁၂၅ဝဝကျော် ဘေးကင်း??
မန္တလေးတွင် အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး သပိတ်စခန်း ဖွင့်မှုကြောင့် ထောင်ကျခဲ့သည့် သံဃာများ လွတ်မြောက်
‘လိပ်ပြာစံအိမ်’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို မြန်မာနှင့် စင်ကာပူတို့တွင် တစ်ပြိုင်နက် ရုံတင်ပြသမည်